ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံက COVID-19 ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး လူဦးရေ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းအား ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထား - Xinhua News Agency
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်မြို့ရှိ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံသည့် စင်တာတစ်ခု၌ စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင် ကာကွယ်ဆေး ပထမဆုံး အကြိမ် ထိုးနှံသည့် မိန်းကလေးတစ်ဦးအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဖနွမ်းပင် ၊ စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ လူဦးရေ ၁၆ သန်း၏ ၇၅ ဒသမ ၃ ရာခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် လူပေါင်း ၁၂ ဒသမ ၀၅ သန်းသည် အနည်းဆုံး COVID-19 ကာကွယ်ဆေး တစ်ကြိမ် ထိုးနှံထားပြီး မဝေးတော့သည့် အနာဂတ်ကာလတွင် ပုံမှန် ဘဝ ပြန်လည်ရောက်ရှိရေးအတွက် မျှော်လင့်ချက် မြင့်တက်လာကြောင်း တာဝန်ရှိသူများ နှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်မြို့ရှိ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံသည့် စင်တာတစ်ခု၌ စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင် ကာကွယ်ဆေး ပထမဆုံး အကြိမ် ထိုးနှံရန် စောင့်ဆိုင်းနေသည့် ကလေးများအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်မြို့ရှိ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံသည့် စင်တာတစ်ခု၌ စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင် ကာကွယ်ဆေး ပထမဆုံး အကြိမ် ထိုးနှံရန် စာရင်းပေးနေသည့် ကလေးများအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
လူပေါင်း ၁၂ ဒသမ ၀၅ သန်းအနက် ၁၀ ဒသမ ၃ သန်း သို့မဟုတ် ၆၄ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်းသည် ကာကွယ်ဆေး နှစ်ကြိမ် ထိုးနှံမှု နှင့်အတူ အပြည့်အဝ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပြီး ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ၈၃၀,၈၁၄ ဦး သို့မဟုတ် ၅ ဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်းသည် အပိုဆောင်းထိုးနှံထားကြောင်း ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ အတွင်းဝန် နှင့် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Or Vandine က ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
“စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်အထိ ရည်မှန်းထားတဲ့အရွယ်ရောက်သူ ၁၀ သန်းရဲ့ ၉၈ ဒသမ ၂၇ ရာခိုင်နှုန်း ၊ အသက် ၁၂ နှစ်ကနေ ၁၈ နှစ်အောက် ဆယ်ကျော်သက်လူငယ် ၂ သန်းနီးပါးရဲ့ ၈၈ ရာခိုင်နှုန်း နဲ့ အသက် ၆ နှစ်ကနေ ၁၂ နှစ်အောက်အထိ ကလေးသူငယ် ၁ ဒသမ ၉ သန်းနီးပါးရဲ့ ၂၅ ဒသမ ၉၄ ရာခိုင်နှုန်းက အနည်းဆုံး ကာကွယ်ဆေး တစ်ကြိမ် ထိုးနှံထားပါတယ်။”ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသည် တရုတ်နိုင်ငံက အဓိကကာကွယ်ဆေး ထောက်ပံ့သူ ဖြစ်သည်နှင့်အတူ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေး လှုပ်ရှားမှုအား ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စတင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ဆမ်ဒတ် တက်ခ်ဟို ဟွန်ဆန်က တရုတ်နိုင်ငံထုတ်ကာကွယ်ဆေးများသည် နိုင်ငံအား လူအုပ်စုအကြား ကိုယ်ခံအားစနစ် ဖွံ့ဖြိုးရန် ကူညီခဲ့ကြောင်း ၊ ရောဂါကူးစက်မှုများ ၊ ဆေးရုံတင်ကုသမှုများ နှင့် သေဆုံးမှုများအား လျှော့ချပေးကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“တကယ်လို့ တရုတ်နိုင်ငံက ကာကွယ်ဆေးထောက်ပံ့မှု မရှိဘူးဆိုရင် အခုထိ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံက အများဆုံး လူ ၂ သန်းကိုပဲ ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနိုင်မှာပါ။”ဟု ၎င်းက စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် ဖနွမ်းပင်မြို့၌ ပြုလုပ်သော တရုတ်နိုင်ငံအကူအညီဖြင့် တည်ဆောက်သော Morodok Techo အမျိုးသားအားကစားရုံလွှဲပြောင်းပေးအပ်သည့် အခမ်းအနားတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရှိ WHO ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Li Ailan က ယနေ့အထိ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသည် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ဝယ်ယူမှု ၊ COVAX Facility နှင့် လှူဒါန်းမှုများမှတစ်ဆင့် အရင်းအမြစ်သုံးခုမှ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အကြိမ်ရေ ၂၉ ဒသမ ၆ သန်း လက်ခံရရှိထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ လက်ခံရရှိထားသည့် စုစုပေါင်း ကာကွယ်ဆေးများအနက် ဆေးအကြိမ်ရေ ၂၂ ဒသမ ၅ သန်း သို့မဟုတ် ၇၆ ရာခိုင်နှုန်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံမှ ရယူခဲ့သည့် Sinovac နှင့် Sinopharm ကာကွယ်ဆေးများ ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ဆေးအကြိမ်ရေ ၄ ဒသမ ၃ သန်း ညီမျှသော ၁၄ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် တရုတ်နိုင်ငံက ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသို့ လှူဒါန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း WHO ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Li Ailan က ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသည် WHO အနောက်ပစိဖိတ်ဒေသအတွင်း ကာကွယ်ဆေးများ ပြည့်စုံလုံလောက်စွာ ရယူနိုင်ခြင်း နှင့် ရည်မှန်းထားသည့် လူဦးရေအား ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေးရာတွင် အအောင်မြင်ဆုံးနိုင်ငံများအနက် နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
“ရည်မှန်းထားတဲ့ အသက် ၁၈ နှစ်နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ လူပေါင်း ၁၀ သန်းကို ကာကွယ်ဆေး ဖြန့်ဝေပြီး ၈ လအတွင်း အခု ၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှာ အပြည့်အဝ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေးမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ နားလည်ထားပါတယ်။”ဟု WHO ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Li Ailan က ဆင်ဟွာသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဒီအောင်မြင်မှုက မူလစီစဉ်ထားတဲ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လထက် အများကြီးစောကာ ပြီးမြောက်သွားတာပါ။”ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
WHO အနေဖြင့် ကာကွယ်ဆေး အပြည့်အဝထိုးနှံသူများအကြား ရောဂါပြင်းထန်မှု ၊ ဆေးရုံတင်ကုသမှုများ နှင့် သေဆုံးမှုများ လျော့ချခြင်းများတွင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း အကျိုးသက်ရောက်မှုကို တွေ့မြင်ခဲ့ကြောင်း WHO ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Li Ailan က ပြောကြားခဲ့သည်။
WHO က ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ အစိုးရ၏ ခိုင်မာသောဦးဆောင်မှု ၊ တတ်ကြွသောလူထုပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းတို့ ပေါင်းစပ်မှု နှင့် ထိရောက်သောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများက ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ဆေး ဖြန့်ချိရေးအတွက် ကြီးမားသည့် အောင်မြင်မှု ဖြစ်စေသည့်အတွက် အလွန်ဝမ်းသာကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
စီးပွားရေးကဏ္ဍ နှင့် ခရီးသွားကဏ္ဍတို့အား ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းမပြုမီ COVID-19 ရောဂါအန္တရာယ်လျှော့ချရေး အစီအမံများအား ထားရှိရန် အရေးကြီးကြောင်း WHO ဌာနေကိုယ်စားလှယ်က ပြောကြားခဲ့သည်။
“စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေက မဝေးတော့တဲ့ အနာဂတ်မှာ လုံခြုံစိတ်ချပြီး တာဝန်သိသိ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ အခုထဲက ကြိုတင်ပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်။”ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရှိ UNICEF ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Foroogh Foyouzat က ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသည် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုတွင် မယုံနိုင်လောက်အောင် တိုးတက်မှုကို တွေ့မြင်ရကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့ အခုထိ ရည်မှန်းထားတဲ့ လူဦးရေကို ကာကွယ်ဆေးလွှမ်းခြုံမှုက သိသိသာသာကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။”ဟု ၎င်းက ဆင်ဟွာသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ “ဒါက ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနဲ့ အာဆီယံဒေသတွင်းမှာ ကာကွယ်ဆေး အများဆုံး ထိုးနှံတဲ့ နိုင်ငံတွေထဲက တစ်ခုအဖြစ် ထူးခြားသော အောင်မြင်မှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။”ဟု ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဖနွမ်းပင်မြို့ရှိ Preah Sisowath အထက်တန်းကျောင်း၏ ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီး Sam Kamsann က တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ကာကွယ်ဆေးနှင့်အတူ ကပ်ရောဂါကြောင့် ၇ လနီးပါး ကျောင်းထားရပြီးနောက် ပြီးခဲ့သောအပတ်တွင် စာသင်ကျောင်းများသို့ အလယ်တန်း နှင့် အထက်တန်ကျောင်း ဆရာများ နှင့် ကျောင်းသား/သူများသည် တစ်ဖြည်းဖြည်း ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကို ကာကွယ်ဆေးထောက်ပံ့ပေးတဲ့အတွက် တရုတ်နိုင်ငံကို အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။”ဟု ၎င်းက ဆင်ဟွာသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ “တကယ်လို့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အကူအညီသာ မရှိဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆရာ/ဆရာမတွေနဲ့ ကျောင်းသား/သူတွေကို ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေးဖို့ ကာကွယ်ဆေး အလုံအလောက် ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။”ဟု ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
Sinovac ကာကွယ်ဆေး အပြည့်အဝ ထိုးနှံထားသည့် Kamsann ဆိုသူက COVID-19 ရောဂါမှ ကာကွယ်ရာတွင် ဆေးထိုးနှံခြင်း၏ ဘေးကင်းမှု ၊ အရည်အသွေး နှင့် အစွမ်းထိရောက်မှုအား လုံးဝယုံကြည်မှုရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသည် စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင် COVID-19 လူနာသစ် ၆၂၂ ဦး စစ်ဆေးတွေ့ရှိပြီး လူနာပေါင်း ၁၀၄,၇၁၆ ဦးထိ ရှိလာခဲ့ကြောင်း နှင့် ထပ်မံသေဆုံးသူ ၁၄ ဦး ရှိပြီး သေဆုံးသူပေါင်း ၂,၁၂၃ ဦးထိ ရှိလာကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနထံမှ သိရသည်။
ထို့အတူ ပြန်လည်သက်သာလာသူ ၄၇၃ ဦး ရှိသဖြင့် ပြန်လည်သက်လာကောင်းမွန်လာသူ စုစုပေါင်း ၉၇,၇၀၀ ဦး ရှိကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနထံမှ သိရသည်။ (Xinhua)
# ## # #ကာကွယ်ဆေး #ဆင်ဟွာ #xinhua #myanmar #xinhuamyanmar
PHNOM PENH, Sept. 20 (Xinhua) — Cambodia has administered at least one dose of COVID-19 vaccines to 12.05 million people, or 75.3 percent of the kingdom’s 16-million population, raising hope forareturn to normal life in the near future, officials and experts said on Monday.
Of them, 10.3 million, or 64.4 percent, have been fully vaccinated with both required shots, and 830,814, or 5.2 percent, have receivedabooster dose, health ministry’s secretary of state and spokeswoman Or Vandine said inareport.
“As of Sept. 19, some 98.27 percent of 10 million target adults, 88 percent of nearly2million target adolescents aged from 12 to under 18, and 25.94 percent of almost 1.9 million target children aged from six to under 12 have taken at least one vaccine dose,” she said.
“If there were no vaccine supplies from China, so far, Cambodia could have vaccinated2million people at most,” he said during the handover ceremony of the China-aided Morodok Techo National Stadium in Phnom Penh on Sept. 12.
“We understand that the targeted 10 million people aged 18 years old and older will be fully vaccinated within eight months of the vaccine rollout, possibly by October 2021,” she told Xinhua. “This achievement occurs much earlier than the date originally planned of June 2022.”
She said the WHO has seen the impacts of Cambodia’s COVID-19 vaccinations in the reductions of severe disease, hospitalizations, and deaths among those fully vaccinated.
“WHO is very pleased thatacombination of the Cambodian government’s strong leadership, active public participation, and effective partnerships makes Cambodia’s vaccine rolloutagreat success,” Li said.
“Businesses should prepare now for reopening safely and responsibly in the near future,” she said.
Foroogh Foyouzat, representative of the United Nations Children’s Fund (UNICEF) in Cambodia, said Cambodia has seen an “incredible progress” in its COVID-19 vaccinations.
“Cambodia has done remarkably well in its vaccination coverage of the targeted population so far,” she told Xinhua. “This makes it one of the most vaccinated countries in the ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) region and globally, an exceptional achievement.”
“We’re very grateful to China for supplying the vaccines to Cambodia,” he told Xinhua. “If there was no China’s help, until this hour, we wouldn’t have enough vaccines to inoculate our teachers and students.”
Additional 473 patients recovered, taking the total number of recoveries to 97,700, said the health ministry. Enditem
Photo 1 – A girl receives her first dose of COVID-19 vaccine at an inoculation center in Phnom Penh, Cambodia on Sept. 20, 2021. (Photo by Phearum/Xinhua)
Photo2– Children wait for the first dose of COVID-19 vaccine at an inoculation center in Phnom Penh, Cambodia on Sept. 20, 2021. (Photo by Phearum/Xinhua)
Photo3– Children register for the first dose of COVID-19 vaccine at an inoculation center in Phnom Penh, Cambodia on Sept. 20, 2021. (Photo by Phearum/Xinhua)